Fixes uye mazano eFSX cfg settings
mubvunzo Fixes uye mazano eFSX cfg settings
1 gore 2 ago #973 by DRCW
Nezvitsva zvitsva ndakaisa pamwe zvimwe zvigadziri zvinogona kuita kuti kubhururuka kwako kuwedzere kusvika (Graphics wise). Yokutanga
chikamu chichakupa iwe kugadzirisa kukuru kunodiwa muFSX. Kana iwe une FSX Steam Edition iwe haufaniri kuita ichi chikamu chekutanga.
(Izvi zvinogadziriswa kune zvirongwa zvine quad core kana zviri nani CPU uye zvishoma zve 4 gigs RAM kana zviri nani)
Mune mamwe mazwi, mamwe maitiro emazuva ano.
Chikamu chimwechete: kuzivikanwa uye kudiwa kuchinja
Kutanga tinoda kusvika kune chikuru FSX config file ( Iva nechokwadi chekuti wakaisa mahwindo kuratidza mafaira akavanzwa uye mafaira )
Sarudza Kutanga / Computer / C: / Vashandi / Zita rako kana makombiyuta zita / Appdata / Roaming / Microsoft / FSX
Kana uchinge watanga fSX faira uwane iyo fsx.cfg faira uye uzarurire iwe notepad. Inofanira kutarisa seyiyi:
MUTSI = 1
InfoBrakesEnable = Chokwadi
InfoParkingBrakesEnable = Chokwadi
InfoPauseEnable = Chokwadi
InfoSlewEnable = Chokwadi
InfoStallEnable = Chokwadi
InfoOverspeedEnable = Chokwadi
WideViewAspect = Chokwadi
User Objects = Ndege, Helikopta
SimObjectPaths.3 = SimObjects \_ Boti
Nzvimbo = 421,0,1740,1036, \_\_. \_ DISPLAY1
MASHOKO OKUITA = 1
DzingaTurbulence = 0
Mamiriro = 1920x1080x32
Shanduro = 1,2
Kureba = 1,3
Ona_Self = 1
PejiID = 1
KUTSIRA = C: \_ Vashandi \_ Darrin \_ Documents \_ Flight Simulator X Files \_ 737
Mepu_Orientation = 2
SelectAircraftManufacturer = Zvose
SelectAircraftPublisher = Zvose
SelectAircraftType = Zvose
ShowATCTText = 1
ZVAKAWANDA = 0
MISORO = 0
Mutoro = 0.000000
UnlimitedFuel = Inhema
TrueAirspeed = Chokwadi
AutoCoord = Chokwadi
RealMixture = Nhema
KushungurudzikaDamage = Chokwadi
GEffect = Ichokwadi
ManualLights = Nhema
GyroDrift = Nhema
CrashWithDyn = Nhema
CrashDetection = Chokwadi
AutoTrim = Nhema
RegaiEngineDamage = Nhema
Guta = Twin Falls
KudzoraRokutangaRun = 0
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ Cessna.DLL.ortccozanotwarwarnajerloiorbuznahzlzzwcnl = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ Cessna172.DLL.naewwuikittlereqluuonlneoouooozzobobcrz = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_06_kutambudza pa.GAU.bcinqoaarbwutthknnhtqauewekaekubiibzcncu = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_07_kuvhiringidza kubva.GAU.bcinqoaarbwutthknnhtqauewekaekubiibzcncu = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_08_gate kuenda.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_10_huwandu hwemashoko.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_11_mavhidhiyo mahara.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_15_main service.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_17_begin desccent.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_18_yo nzira.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_19_kupedzisira.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_20_taxi kune gedhi.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
D: \_ FSX \_ GAUGES \_ FDSFX_21_gumo rekuuya.GAU.lchaaiubzzoorikqtqizriolcetkrqbwtqqcniba = 2
kuratidza_flight_history = 1
Tichazotanga muchikamu chekuratidza. Kana uri kushandisa LCD Monitor kana chero widescreen ipapo tichada kuchinja zvinotevera zviri mu [Kuratidza] Chikamu.
WideViewAspect = Nhema
Shanduka Manyepo kuChokwadi
Pasi payo pasi [Graphics] chikamu chine zvinotevera:
IW HIGHMEMFIX = 1 ndiyo inonyanya kukosha pakuti inobvumira FSX kuti iite tp 4 gig paVAS (Virtual Address Address) Kana uri kushandisa nzvimbo yekuwedzera-ndege uye
autogen uye dzimwe sliders zvakaoma kurudyi. Iyi mutsara inowanikwa muy file yako yekubatsira ichabatsira kudzivirira OOM's ( kunze kwekuyeuka kukanganisa ) Ndezvipi zvinowanikwa muFSX. The Steam
Shanduro yakatove inosanganisira kuchinja uku kwewe nekusava.
Iniwo ndinokukurudzira kuti uite Process Explorer at www.sysinternals.com . Ichi chishandiso chichakubatsira kuti uone uye unzwisise kushandiswa kweVAS paunenge uchienda
saka iwe unogona kuona kuti FSX iri kutarisira sei hurongwa hwemamiriro ako. Ichazongorongedzerwa sokunge VS ( virtual space ) Uchaonawo CPU uye kushandisa RAM zvakare.
Kunzwisisa izvi kuchakubatsira kugadzirisa FSX kwezvikepe zvenguva refu pasina iyo OOM inotyisa inoitika mushure mekufamba kwemaawa 10 nenguva yekupedzisira.
Isu tose tinofanira kunge takatsvaga kuona 64 bit version yefamberi simulator asi kusvikira 4 gigs yeVAS ndiyo yakanakisisa yaizoita.
Uyewo pasi payo b] GRAPHICS [/ b chikamu chine mutsara unotevera:
Shanduka ku2048 kana 4096
Nokusingaperi FSX yakagadzirirwa ku1024 semuenzaniso usingati Dhigirii. Iwe haugoni kunakidzwa chaizvo neHD graphics pane wako widescreen chekuona nenzira iyi. Dzimwe ndege
download (payware) haingarati zvingaita kunze kwekuti iwe une mutsara wakaiswa ku4096. Kamwe zvakare Steam Edition inenge yatotangisa ku 4096 nekusara. Unogona
zvakare edza 2048 iyo ichiri HD. Icho chichatsigira pane iwe fps (mapurisa pamusi wechipiri) Cherechedza: Kana ukashandura zvirongwa zvako (Sliders) muFSX unoda kugadzirisa iyi imwe mutsara
sezvo ichadzokera kumashure 1024.
Izvo pamusoro apa ndiwo mutemo mukuru. Iwe unofanira kutanga FSX mushure mekuita 3 pamusoro pekushandura uye kumhanya kushanya kwenguva pfupi panzvimbo yaunowanzobhururuka. Ndinoziva iwe uchacherechedza a
Chikamu 2: Blurry scenery general fixes.
Ndinokurudzira mushure mekutevedzana kwezviitiko zvinotevera iwe unotanga FSX saka kana uine nyaya ne fps iwe unogona kungovhara purogiramu uye woisa zvakare mutsara kumashure. Ichokwadi
kunotsvaga purogiramu iwe uri kutamba FSX. Ndine 8 Core processor ne 2 high def graphic makadhi anobuda mu firewire uye 16 gigs ekushanda kwakanaka RAM.
Izvi zvinotevera www.simforums.com/forums/new-twea...25507.html
Kuti kuderedze chikonzero ichi chekuvhiringidza, Microsoft yakagadzirisa zvakare kuti Flight Simulator X scheduler inonyanya kuisa sei mabasa ekutora muFSX. Iye zvino zvakawanda zvekare CPU nguva ndeye
vakazvipira kuendesa zvinyorwa zvinowanikwa munzvimbo dzakasiyana-siyana, kusanganisira nzvimbo dzakagadziriswa, pamutengo wechirongwa chepamusoro. Mune maonero angu, kuchinja uku kwakave kwakagadzirisa chikonzero ichi che
iyo inosvibisa, kunyange zvazvo nzvimbo inotakura inogona kunge ichikwira kumashure akadzika zvakanyanya mashizha (pasi pe10 fps) kana pamhepo inokurumidza kukurumidza (nokukurumidza kupfuura 600 mafundo). Pane
nzira dzakasiyana-siyana dzokugadzirisa kuti CPU nguva FS inoshandiswa sei pakuteerera nzvimbo uye mavara. Nzira iyo iri nyore ndeyokuisa chinangwa chemafreyimi yemadijiti pasi pekukosha kwako
mishini inogona kugadzirisa. Pasi paunoisa slide, iyo inowedzera CPU nguva inodzingwa kubva pakushandura pakuteerera data. Chimwe chinhu chaunogona kuita ndechekuchinja
iri kutevera kuchinjwa muFSX.CFG:
FIBER_FRAME_TIME_FRACTION inogadzira huwandu hwemazuva pafuremu yatichashandira fiber mabasa pamba huru. Tinoyera nguva yakareba sei kuti tifananidze uye tipe uye tigozowedzera nguva iyoyo naFIBER_FRAME_TIME_FRACTION kuti tione kuti ndeipi nguva yakawanda yekushanda fiber. Somuenzaniso, kana zvichitora 10 milliseconds kuti zvienzanise uye zvipe uye FIBER_FRAME_TIME_FRACTION yakagadziridzwa kuhutengo husati hwasvika we0.33, zvino tinogona kubvumira fiber patsambo yekutanga kutamba kusvika ku10 * 0.33 = 3.3 millisecond. Nezvikamu zviduku zve 1.0 ne2.0, nguva yakapiwa mafibisi yaizova 10 milliseconds uye 20 milliseconds, maererano.
[n = 0.01 - 0.99] Pamitambo yeCoyad kana kuti zviri nani edza 0.70
Kwemichina yakakosha yemitambo yakambotaurwa kuti pamusoro apa haisi kudiwa uye ndicho chikonzero chinotadza chiri 0.33. Ndakangozviedza kunze uye ndakaona kuti yakanyatsobatsira ini. Nzira imwe neimwe yakasiyana ne hardware uye software pamwe chete. Saka iwe unofanirwa kupoteredza nekukanda maitiro anowedzera zvakanakisisa pane imwe purogiramu yako. Saka zvinhu zvakawanda zvinoshanda. Ndinoshuva kuti ndaigona kutaura kuti kune rimwe bhuku rinoenderana nechinetso chose, asi hapana. Kana iwe uri nehurukuro neFPS (mafaira pamutsara) pane yako yazvino ikozvino usati watanga kubvarura Ndinokurudzira kuti ugadzirise chinetso ichocho pakutanga nekuisa sliders kune imwe nzvimbo iyo mhepo yako iri kushanda nguva dzose uye inovachengeta ikoko. Edza mishoni yako pane dense nzvimbo uye edza kuchengeta 20 fps. Iwe unogona kuisa nguva pfupi fps limiter kusvika kusingagumi uye unomhanya FSX kuburikidza nemakumbo acho, ndokubva wadzorera zvakare ku 30fps (hafu yezinga kana kuti vatariri vako vanovandudza tsananguro) Kana uri kufunga nezvekuve ari hardcore simmer saka iwe uchipa kombiyuta chete nokuda kwekufamba simulator nzira yokuenda nayo. Iwe uchaponesa mujenya we $$$ nekuvaka yako purogiramu.
Mu b] TERRAIN [/ b chikamu chinotevera:
Shanduka ku 6.500000 kusvika ku 7.500000
Izvo zviri pamusoro apa zvinosarudza kureba FSX inotora nzvimbo (sharpness) uye inoshanda naTIME_FRAME_TIME_FRACTION.
Kuchinja mutsara uyu kuchawedzera kuenderera mberi kure nemhepo. (Cherechedza zvichawedzerawo kushandiswa kweVAS yako zvishomanana)
Mu [Terrain] Chikamu
Iva nechokwadi chokuti izvi zvakagadzirirwa kuDETAIL_TEXTURE = 1
Izvi zvichave zvakakosha kubhizimisi vashandi vemifananidzo. Uchaona kubwinya kwakanyanya kune uswa pamusana wepasi uye nekuvandudzwa kwakakura mumasose eziso ose mumhepo achitarisa pasi.
Chikamu 3: Kubatsira kutora mutoro wacho kure FSX. Iwe unogona kubatsira maikirini ako achiwedzera nekuve neHD graphics yako kadhi kuita zvimwe zvebasa re CPU yako.
Heano mamwe mavhidhiyo anobatsira:
Vhidhiyo inotevera inobva kuna Flight Sim Addict uye anoziva vazhinji vanogadzirisa zvakare. Ndinofunga kuti iyewo ari nhengo yeReX Team.
Ndinoshandisa Megascenery uye Blue Sky uye zvakawanda zvayo. Ndokusaka ndine 2 TB HD yakatsaurirwa kune FSX. Kunyange zvazvo ini ndisingafaniri kunetseka nezve autogen, chinyorwa chemafoto chinogona kunge chakaoma mumhepo yakadzika yepamhanza kana zvasvika pakusimba. Ndakashandisa tweaks iri pamusoro apa kunatsiridza hutsinye paC500 saka nokuita kuti kutora kwangu uye kubhururuka kunowedzera.
Kubatsira kukuru kune chinyorwa chinyorwa pasina autogen kushandiswa kweVAS kunonyatsochengetwa pamwe ne 10 fps kuwedzera kusataura truer kudhindwa kwaunenge uchibhururuka. Ikoko pachava nemafungiro anongoda zvakawanda uye akawanda asi ipapo pachava nekugadzirisa chiito chekudzivirira chirongwa chepurogiramu kusvikira chokwadi 64 bit platform yakabudiswa. Kutungamirira kwakachenjera pamwe nokunzwisisa kwakanaka kwemakine ako kuchaenda nenzira yakareba pakuita kuti FSX inakidze uye yakagadzikana.
Ndinotarisira kuti izvi zvinokubatsira mukuita uye zvinogadzira FSX yakawanda purogiramu yemazuva ano.
Time chokusika peji: 0.326 mumasekonzi